Abalandeli bancengela uLebese kwiChiefs - Ilanga News
Home Ezemidlalo Abalandeli bancengela uLebese kwiChiefs
Naye uthi ukulangazelele ukubuyela enkundleni
U-GEORGE Lebese uthi unesifiso esikhulu sokubuyela enkundleni adlale ibhola.
ABAZWELANA nowaye-ngumdlali odumile we-Kaizer Chiefs neMame-lodi Sundowns, uGeorge Lebese (30), kodwa okumanje uhleli ekhaya, sebeqale umkhankaso wokunxusa (petition) iChiefs ukuba imbuyisele ekilabhini. Bakholwa wukuthi kumfanele ukuba anikezwe elinye ithuba, abonakalise ithalente lakhe futhi enkundleni.
Izolo ngoMgqibelo ILANGA LangeSonto lilobe lolu daba le petition isisayinwe ngabantu abangaphezu kuka-400, kanti kubhekwe ukuba isibalo sigcine ku-500.
Bephawula abanye abalandeli beChiefs ngale petition ezinku-ndleni zokuxhumana, kucacile ukuthi abanye basamsola ngoku-thi wabadayisa ngokushiya ikila-bhu, ngakho bathi akafanelwe wukunikwa elinye ithuba, kanti abanye bathi makanikezwe.
Ukuqalwa kwale petition kula-ndela ukuba uLebese evele esi-teshini sikamabonakude sikaRobert Marawa, esibizwa ngeMarawa TV, esitholakala kuYouTube, lapho ebhoboke khona ngesimo sakhe kusukela ashiya iChiefs, waya kwiSundowns.
Uthi into ake wayizwa wukuthi abantu banomcabango wokuthi ufuna ukukhokhelwa imali enkulu, kodwa akazi ukuthi lokhu kuqhamukaphi.
Uqhube wathi kumanje akanayo ngisho i-agent. Into athi uyifuna kakhulu empilweni yakhe njengamanje wukubuyela, adlale ibhola.
Uphawule nangethuba abezi-tshela ukuthi liyamvulekela kwenye ikilabhu yaseThekwini kodwa labuye lashabalala. Uveze ukuthi kwathi ngosuku okwaku-mele abuye ngalo eGoli, kwangena ucingo lumtshela ukuba ame kancane, namanje usamile.
Uthi ngesikhathi elaxaza iKaizer Chiefs wayesajabule ukuyidlalela, kodwa kwaba khona izinto eziningi nezilingo ezamenza ukuba athathe isinqumo sokuyishiya.
Isikhathi lapho kwakumele athathe khona lesi sinqumo sokushiya iChiefs uthi sasinzima, futhi kwakumele asithathe ngo-kushesha.
“Kwakuyisigaba esinzima lapho kwakumele ngenze isinqumo futhi ngokushesha. Kwaku-nezilingo eziningi. Ngeke ngisole muntu ngokuthi angitholanga izi-yalo ezifanele. Ngingathi kwakuyinto engangiyifuna ngalesiya sikhathi (ukuhamba).
“Ngangisajabule kwiChiefs. Kodwa kuningi okwaba nomthe-lela, ngalingeka ukuba ngenze lesiya sinqumo,” kusho yena.
Uthi ngesikhathi ejoyina iSundowns kwakukuningi okwakuli-ndeleke kuye, futhi ingcindezi ayeyithola yayivela kubalandeli bamaqembu womabili.
“Ingcindezi yayinkulu, kakhulukazi eyayivela kubalandeli be-Chiefs abebephoxekile. Ngathola imiyalezo eminingi, abanye babo bengibiza ngexoki. Kwakungali-ndelekile ukuba ngenze isinqumo esinjengalesiya.
“Bonke abalandeli babenethe-mba lokuthi ngizohlala (kwiChi-efs) isikhathi eside, ngibe ngenye yezingqwele eqenjini. Kodwa-ke wafika lowo mzuzu, izinto zashi-ntsha, ngenza isinqumo. Ngeke ngithi ngiyazisola ngaso kodwa uma ngase kuthiwe angisenze futhi, mhlawumbe ngingenza isinqumo esingcono,” kuchaza yena.
Previous articleUSuthu luxoshe owodumo
Next articleUhlokoloze iziqandu othe uZozibini mubi